Raharaha “kidnapping” : “Ara-dalana ny fahazoako LP”, hoy i Renaud dit Nono
mardi, 03 avril 2018 09:29
Niala tamin’ny fahanginany i Renaud dit Nono manoloana ireo vaovao niely an-gazety sy amin’ny haino amanjery ary tambazotran-tserasera facebook mitonona sy manaratsy ny anarany, fa voasaringotra amin’ny raharaha fakana an-keriny na “kidnapping” niseho teto Toamasina ny faramparan’ny volana novambra 2015. Vaovao izay raisin’i Nono ho “fanalam-baraka sy endrikendrika” tsotra izao.
Rehefa nitranga iny raharaha iny dia natao famotorana lalina taty Toamasina ny tenako, hoy i Renaud dit Nono. Nakarina tao amin’ny Fampanoavana ary nandeha “instruction” ny antotan-taratasin’ady. “Ka rehefa hita fa tsy nisy zavatra nitombona ny fiampangana ahy dia nahazo fahafahana vonjy maika ny tenako. Mazava loatra noho izany fa tsy niditra ny fonja ny tenako na taiza na taiza”, hoy i Nono.
“Tsy marina ny filazana fa nigadra tany Ambatolampy ny tenako. Raha nisy izany, hoy hatrany ny fanazavany, dia “tokony nampiseho taratasy famonjana ahy izay miteny izany fa izaho tsy nanana ary tsy naharay izany. Izaho rahateo tsy nandositra”, hoy ity farany.
Raha ny fanazavan’i Renaud dit Nono hatrany dia maro ny olona voasambotra ary nampidirina amponja. Tao aorian’izay, hita ny fiara sy ny zaza nisy naka an-keriny. “Tsy nisy nitonona ny anarako na iray aza ireo olona marobe ireo. Ary tsy nahitana porofo nifandray tamiko ihany koa izy ireo. Tamin’ny fahitana ny fatin’ilay zazavavy dia tsy natao famotorana na kely ny tenako nefa teto Toamasina foana, nefa nosoketaina ho nanao “viol” sy nampisotro gazoala an’iny ankizy iny. Tsy mbola nisy ny fotoana nialako teto Madagasikara taorian’izany fa niriaria toa ny olon-drehetra ny tenako ary nanohy ny asa aman-draharahako”.
Roa taona taty aoriana, nisy fitsarana ny raharaha tany Antananarivo ka namoahana didy “migadra mandrapahafaty ny tenako miaraka amin'ny didy fampisamborana”. Nilaza i Nono fa tsy nanatrika io fitsarana io satria “tsy nahazo fiantsoana na ‘convocation’ akory”. Izay no nambarany fa nanaovany, tamin’ny alalan’ny mpisolovavany, “opposition” na fanoherana io didim-pitsarana tsy natrehany nivoaka io.
Fotoana vitsy taty aoriana, nosamborina tany Mahajanga i Nono ary noentina tao amin’ny Toby Ratsimandrava, avy eo nampidirina tao amin’ny fonjaben’i Tsiafahy.
Nanao fangatahana fahafahana vonjimaika (LP) ny mpisolovavany ka nitondra ny porofo sy nitondra ny fanazavana rehetra teo anoloan’ny Fitsarana. “Noraisin’ny Fitsarana, nohenoiny ary nodinihiny ireo porofo rehetra nentinay. Ara-dalana ny fahazoako LP, ary aza afangaro amin’ny resaka politika”, hoy i Renaud dit Nono.
Nanamafy ity farany fa “tsy mbola nandositra ny fonja, ary tsy mbola nanao kidnapping izany aho tao anatin’ny 43 taona niainako teto ambonin’ny tany. Manambady aman-janaka ny tenako nefa noho ireo vaovao miely etsy sy eroa dia mitebiteby sy tsy milamin-tsaina izahay mianakavy”.